डोलीमा चढाएर बिदाइ गर्नुपर्ने छोरीलाई बाँसको खटमा राखेर घा’टमा लानु पर्दा घरमा रुवाबासी……. (भिडियो सहित) «
डोलीमा चढाएर बिदाइ गर्नुपर्ने छोरीलाई बाँसको खटमा राखेर घा’टमा लानु पर्दा घरमा रुवाबासी……. (भिडियो सहित)
Published : 15 February, 2020 9:14 am
सवारी दु’र्घटनामा परी नायिका महिमा सिलवालको नि’धन भएको छ । काठमाडौंबाट चितवन जानेक्रममा उनी सवार बा ९८ प ७०५८ नम्बरको स्कुटरलाई लु २ ख १३५ नम्बरको बसले ठ’क्कर दिँदा सिलवालको नि’धन भएको थियो । दु’र्घटनामा ग’म्भीर घा’इते भएकी उनकी बहिनी सर्मिलाको पनि ज्या’न गएको छ । चितवन जिल्लामा बहिनीको ‘इन्गेजमेन्ट’मा जान लागेको बेला दु’र्घटना भएको थियो । बहिनीको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउनेक्रममा बाटोमै नि’धन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घ’टना बुधबार साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा गजुरी गाउँपालिका, वडा नम्बर २ चाम्बासमा घटेको हो। प्रहरी निरिक्षक पाण्डेका अनुसार घुम्ती क्रस गर्ने क्रममा स्कुटी र बस एकआपसमा ठो’क्किएका हुन्।
उनले बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१२ शिवनगरकी अभिनेत्री महिमा सिलवालले एक दर्जनभन्दा बढी फिल्म र दर्जनौं म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन् । ‘का’रवाही’ फिल्मबाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी उनले ‘जिगोलो’, ‘अप्रिल फूल’, ‘दानव’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
उनी अभिनीत अझै आधा दर्जन फिल्म प्रदर्शनको पखाईमा छन् । जुन घरमा केहि दिनमा बहिनीको बिवाह हुँदै थियो आज त्यहि घरमा दुइ छोरिको नि’धन भएको छ । एउटा छोरीलाई डोली चढाएर पठाउन लाग्दै गर्दा दुइ छोरीलाई बासको खटमा राखेर घा’ट लानु पर्दा परिवार त शो’कमा त थियो नै पुरै सिंगो बजार पनि शो’कमा थियो ।
नेपालमा ५ जनामा देखियो कोरोना ! भर्खरै अर्की युवतीमा पनि, काठमाडौं ल्याईदैँ…..(भिडियो सहित)